Bookmaker एक wagering थियो कि पछि इन्टरनेट आधारित छ 1996 र त्यस पछि धेरै बेट्स अप समर्थन छ. व्यक्ति बास्केटबल सहितको धेरै प्रकारका गतिविधिहरू बेसबलका लागि बाजी दिन सक्छ, हकी, लडाई शैली, घोडा दौड, र अझ धेरै. थप, खेलाडीहरूले Bookmaker.com पोकर क्षेत्रमा पोकर खेल्न सक्छन् वा तिनीहरूको पूर्ण-सेवा क्यासिनोमा यसलाई जुवा खेल्न सक्छन्. तपाईंको आवश्यकताहरू जुन शर्त हो, तपाईं सजिलैसँग आराम गर्न सक्नुहुन्छ कि Bookmaker.com तपाईंले कभर गर्नुभयो.
Bookmaker.eu रंगीन छ कि भूत एक समावेश गर्दछ. पुरुषहरूको सेटसँगै सिर्जना गरिएको हो जुन समय गरेकोमा घाइते हुन्छ (तर तिनीहरू अब शीर्ष-बोर्ड प्रदायक हुन्), ब्रान्ड नामले १ 1980 s० को मध्यदेखि एक गैरकानूनी अपतटीय खेल संचालनको रूपमा स्थापित भएको देखी धेरै ठूला पुनर्स्थापनहरूको सामना गरिसकेको छ.
बेटरहरू जो केहि समय अनलाईनमा अनलाइन खेलमा आएका छन् Book Book.eu मनमा राख्न सक्दछ योको नामबाट यो पक्कै पनी अघिल्लो हो. त्यो प्रक्रिया उपयुक्त कठिनाइमा लिप्त भयो, र अन्तमा कोस्टा रिकामा एक मुख्यालय भएको गेम लाइसेन्सको प्रयोग गरेर साइट उजागर गरियो यो पक्कै वैध हो.
Bookmaker.eu मनोरञ्जन क्यासिनो लिदै थियो, र पोकर वेजर्स विचार गर्दैछ कि १ 1980 considering० को दशक, १ 1990 1990 ० को दशकमा देखा पर्ने खेलहरूका अनलाइन संस्करणहरू सहित, कि उद्योग फस्टाउन थालेको रूपमा. तपाईंको वेबसाइटले यस्तो प्रतिष्ठा समावेश गर्दछ जुन खराब समीक्षा वा ग्राहक गुनासोको रूपमा प्रायः धेरै लामो हुँदैन, साथै विश्वव्यापी व्यक्तिहरूको बहुमतको लागि विभिन्न जुवा समाधानहरू, अमेरिकामा आधारित betters सहित.
BookMaker जम्मा गर्न को लागी एक सरल खेलपुस्तक हो. सम्झौताहरू चाँडै प्रशोधन हुन्छन्, र त्यहाँ तपाइँको बैंक खाता कोष कसरी गर्ने को एक चयन छन्.
चार्ज कार्ड जम्मा एक आधिकारिकता फाराम पूरा हुन आवश्यक छ. यो राम्रो मानक हो र भर्नको लागि लामो समय लिने छैन, जबकि एक छाप तपाइँ कार्डको द्वारा विकसित गर्नुपर्नेछ (दिशानिर्देश दिइन्छ).
BookMaker ले स्वीकार गर्दछ 60 विभिन्न प्रकारका क्रिप्टो-मुद्रा, र लगातार अधिक समावेश सहित.
हामीले पत्ता लगायौं कि बिटकॉइनको साथ सुरूवात गर्न एकदम सजिलो भएको थियो. वेबसाइटलाई केवल यूएसडीमा जम्मा गर्न कत्ति चाहिन्छ, विवरण बोनस यो निश्चित रूप मा बिभिन्न छ जुन तपाईं योग्य हुनुहुन्छ, जुन पछि तपाइँको निक्षेप वितरण गर्न वालेट लक्ष्य प्रदान गर्दछ. केवल लक्ष्य को प्रतिलिपि गर्नुहोस्, ठेगाना टाँस्न तपाईंको बिटकॉइन वालेट हेर्नुहोस्, सुझाव दिनुहोस् कि यो पैसाको लागि पक्कै पनि वास्तवमा कति छ, त्यसकारण नगद जहिले पनि उपयोग गर्न को लागी तयार हुनुपर्दछ एक पटक छिटै नै एक पटक अतिरिक्त जम्मा गरियो. हाम्रो ज्ञान भित्र, यो दस पूर्ण मिनेट मा तयार गरिएको थियो.
अत्यन्तै मात्र, यो मूलतः सजिलो छ, सबैभन्दा प्रभावकारी, प्रायः प्रणाली जुन खेलपुस्तकहरूमा सहज स easy्ग्रह हो. सुरूबाट टाढा सर्दै जुन मनको ठूलो राज्यमा सबैजना महान हुन्छ, र BookMaker मा सुरू गर्न सजिलो हुन सक्दैन.
फिर्ता & भुक्तान समय
बहुमत साइटहरू मनपर्दछ, त्यहाँ केही प्रिन्ट छ जुन BookMaker मा वितरणको सर्तमा राम्रो ब्राउज छ. त्याे भनेपछि, टेप कि रातो न्यूनतम छ, र थप रूपमा तिनीहरू तपाईंलाई आफ्नो पैसा प्राप्त निश्चित गर्न धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दछन्.
BookMaker मात्र हप्ताको दिनमा भुक्तान अनुरोधहरू प्रक्रिया गर्दछ. एक बिटकॉइन वा क्रिप्टोकरन्सी वापसी प्रति आवश्यक छ, र प्रत्येक अन्य प्रविधि प्रयोग गरेर एउटा छुट्टिको लागि प्रत्येक हप्तामा आवश्यक हुन सक्छ.
ज्ञानमा BookMaker वितरण लामो समयदेखि व्यावसायिक भएको छ. तिनीहरू ओभरको लागि सञ्चालनमा छन् 30 बर्ष, तिनीहरूको विशेष मात्रा ठूलो छ, साथै उनीहरू तपाई र तपाईको पैसालाई सम्मानका साथ व्यवहार गर्छन्. तिनीहरूको निर्देशनहरू पालना गरेर, तिनीहरू आफ्नो ग्यारेन्टीको साथ बाँच्नेछन्. हो, तपाईं धेरै प्रविधिको साथ शुल्क पाउनुहुनेछ, तर प्रस्तावित जानकारी को सबै सजिलै दर्ता अघि एक व्यक्ति प्रतिनिधि संग कुरा गरेर उपलब्ध छ.
यो वास्तवमै दुई हो 50% जम्मा खेल बोनस एक खेल शर्त को लागी एक साथ केहि विशेष क्यासिनो मा दांव को लागी विभिन्न. दुबै बोनस क्याप गरिएको छ $300, तर रोलओभर आवश्यकता फरक हुन्छ. खेलपुस्तक प्रोत्साहनहरूलाई कम्तिमा १०० जम्मा रकम जम्मा ब्याजर्सहरू आवश्यक छन्, जबकि क्यासिनो बोनसलाई x०x निक्षेप र थप मात्राको ब्याजरहरू आवश्यक पर्दछ.
खेलपुस्तक 15% स्वागतम बोनस
नयाँ sportsbook ग्राहकहरु एक कमाउन सक्छन् 15% जम्मा गर्न मिल्छ $2,500. यो अतिरिक्त एक जम्मा शर्त आवश्यकता को लागी संवेदनशील छ जुन xx छ.
खेलकुद प्रोत्साहन पुन: लोड भइरहेको छ
उपभोक्ताहरू तिनीहरूको खास खाताहरू पुन: लोड गर्दैछन् जुन हालको हुन्छन् 10% वा 15% अतिरिक्त मूल्य सँग मिल्छ $2,500. बोनसको मात्रा र सर्तहरू तपाईंको पुन: लोड मात्राको आकारमा निर्भर छन्. Bookmaker ले तपाईंलाई कुनै पनि स्थानान्तरणको लागत फिर्ता पनि गर्नेछ $300 यस बोनसको एक तत्वको रूपमा.
मंगलबार प्रारम्भिक चरा
& निक्षेप $50 वा शायद अधिक मंगलवार वा बुधवार मा (Neteller वा Moneybookers बाहेक कुनै विधिको साथ) र कमाउनुहोस् 20% जम्मा गरेको म्याच वास्तव मा धेरै लायक $1,000 बुधवार. अनलाइन पुन: लोड मात्र.
रेसबुक हार्स रिबेट
क्वालिफाइ race रेसबुक उपभोक्ताहरूले जति सक्दो बनाउन सक्छन् 8% दैनिक नगद फिर्ता, जीत वा ड्रप. अनलाइन फोन यो निश्चित रूपमा मात्र विदेशी छ.
स्लट मेशिन खेलाडीहरु को लागी योग्य छन् 100% जम्मा गर्न अतिरिक्त मूल्य सम्म म्याच $500. यो बोनस वास्तविक समय च्याट मार्फत आवश्यक छ. साइटका बाह्र स्लट खेलहरूको लागि केवल एक प्रयोग गरिरहेका ब्याजरहरू अतिरिक्त क्लियरिंगमा गणना गर्दछन्, जो एक निक्षेप प्लस बोनस रोलओभर लिन्छ यो पक्कै पनि 25x हो.
क्यासिनो तालिका खेल बोनस जोडियो
तपाईं एक प्राप्त गर्न योग्य 100% जम्मा गरेको म्याच वास्तव मा धेरै लायक $250 यदि तपाईं ब्ल्याकजेक र / वा भिडियो पोकर खेल्ने उद्देश्य राख्नुहुन्छ भने, यो बोनस बनाउँछ. केवल ब्ल्याकजेक र चलचित्र पोकर गेमहरूमा बियरहरू थप क्लियरिंगमा गणना गर्दछन्, जुन एक निक्षेप प्लस बोनस रोलओभर लिन्छ जुन x०x छ.
एक-मित्र अतिरिक्त रेफर गर्नुहोस्
तिनीहरू विशेष मागहरू पूरा गर्दछन् यदि तपाईं एक मित्र सन्दर्भ र. तपाईं वास्तव मा लायक एक लाभ उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ 50% जम्मा गर्ने पहिलो हो $500. तपाइँले गर्न सक्नुहुन्छ रेफरलको वास्तविक विस्तृत दायरामा बिल्कुल क्याप छैन.
बिभिन्न अन्य इन्टरनेट साइटहरु वैकल्पिक रूपरेखा प्रदान गर्दछ, तर BookMaker ले ती अत्यधिक विधिमा देखाउँदछ जुन दृश्यात्मक अपील गर्दछ. BookMaker एक साइट मात्र हो जुन पक्कै विश्वव्यापी छ र त्यहाँ विरलै एक खेल छ जुन उनीहरूले बुक गर्दैनन्.
विविधताको सर्तमा, BookMaker विस्तृत विकल्पको साथ आउँदछ. उनीहरूसँग केहि विश्वविद्यालय छ जुन अफ-द-रडार र फुटबल खेलहरू दांव लगाउनको लागि छ, तिनीहरूको दायरा विश्वव्यापी फुटबल लीग बजार मा राम्रो एक हुन जान्छ, र तिनीहरूले रग्बीको लागि फ्यूचरहरू प्राप्त गरेका छन्, क्रिकेट, र डार्ट्स (प्रमुख मनोरन्जनको साथ).
BookMaker एक वेबसाइट मात्र हो निस्सन्देह यो विश्वव्यापी हो र त्यहाँ विरलै पुस्तक छ जुन उनीहरूले बुक गर्दैनन्. लाइनहरू तुरुन्तै हरेक एक मिनेट अपडेट हुने गर्दछन् त्यसैले त्यहाँ कुनै झटकेहरू छैनन् वा प्रायः पुन: लोड गर्न चाहानुहुन्छ.
शर्त जुन न्यूनतम BookMaker हो $1. धेरै जुवा खेलाडीहरूले बेवास्ता गर्ने कुरामा सीमित छन् कि ख्याल गर्दैनन् $1,000, $5,000, वा $25,000. जे होस्, मानिसहरु संग ठूलो bankrolls छ (वा कसैको लागि एक प्रतिस्पर्धा को लागी एक सल्लाह को लागी विशाल हुन को लागी व्यवस्थापन गर्न को लागी मौका हुन सक्दछ जब. BookMaker ले खेल-मा-खेल परिवर्तन गर्दछ, तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ $5,000 वा शायद अधिक घटनाहरूमा जुन महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय मनोरन्जनहरू छन्.
ठूला सीमाहरू हाई प्रोफाइल घटनाहरूमा फेला पार्न सकिन्छ - र्यान्डम टेनिस सूट परमिट वेजरहरू पनि $1,000. स्नूकर जस्तो मार्केट विकल्पहरू, इन्टरकन्टिनेंटल भलिबल, र eSports केहि सय पैसा मा सीमित हुन को लागी गर्छ.
धेरै साइटहरूले आधुनिक शर्त प्रदान गर्दछ यो पक्कै वास्तविक समय हो तर नियमित रूपमा अतिरिक्त निकल वा पैसा पनि इन-गेम बाजी पाउने मौकाको लागि चार्ज गर्दछ।. यद्यपि BookMaker ले कहिलेकाँही लाइभ ब्याजिंगमा रस बढाउँदछ, यो प्राय: जसो मानक ११० मात्र होइन.
तिनीहरूसँग एक चयन छ यो सजिलैसँग उपलब्ध रूपमा प्रभावकारी छ, प्रत्यक्ष गतिविधिहरूको साथ लगातार प्रस्तुत. सभ्य विकल्पहरू - कि यो एक स्क्याटर मार्फत हो, Moneyline, वा हाफटाइम लाइन in in-game स्थित हुन सक्दछ. परिमार्जित प्रत्यक्ष ब्याजिंग शर्त पर्चीसँग लागत परिवर्तनहरू स्वीकार गर्न वास्तवमा विकल्पहरू छन्, छिटो wagers wagering कि सक्रिय गर्नुहोस्(एक क्लिक, र अधिकतम शर्त वैकल्पिक जसले तपाइँलाई जुनसुकै शर्त छान्नुहुन्छ प्रतिबन्ध प्रदान गर्दछ.
BookMaker's रहन को जुवा अनुकूलन योग्य र व्यापक-शिष्टाचार मा छ कि अधिक प्रयोगकर्ताहरु को ज्ञान छ कि उनीहरु खोज्न.
यद्यपि यो कहिले पनि पृष्ठ नदेखिन सक्छ, BookMaker सेलुलर वेब साइट को बारे मा साधारण प्रकृति गजबको छ.
जब तपाईं फोन वा ट्याब्लेट मार्फत लग इन गर्नुहुन्छ, तपाइँको बैंक खाता मात्रा र शीर्ष मा प्रदर्शित उपलब्ध नगदी छ. एक सूची जुन लामो छ स्क्रिनको लागि बीचमा देखाइन्छ. अनुमानको ठाउँमा तपाईले के लगाउन चाहानुहुन्छ, वा एक मार्केटिंग मार्केटिंगको अधीनमा हुन तपाईलाई चासो नै छैन, प्रत्येक मनोरञ्जन एक स्विच को माध्यम बाट विस्तृत छ यो पक्कै पर्याप्त छ. अधिक खेलको खोजी गर्दै यो पक्कै अस्पष्ट छ? केवल तल स्क्रोल गर्नुहोस्.
एक पटक तपाईंको मनोरञ्जन छनौट गरियो, खेलहरू चाँडै सुरू भएको देखाइन्छ. खेल छान्नुहोस् र शर्त लगाउनुहोस् जुन तपाईं खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, बाजीर क्लिक गर्नुहोस् यो निश्चित रूपमा मोबाइल उत्पादनको साथ सम्बन्धित आधार दायाँ-स्थानबाट हरियो छ, जोखिम वा जीत गर्न रकममा जानुहोस्, हिट "स्थान शर्त", र हरियो कन्फर्मेसन स्क्रिन देखा पर्दछ. BookMaker वेब साइट जुन मोबाइलन शो छैन. यो कार्यात्मक हो, छिटो, र रमाईलो.